एन्ड्रोइड १० आधिकारिक रूपमा नोकिया १ प्लस | मा आउँछ Androidsis
एन्ड्रोइड १० आधिकारिक रूपमा नोकिया १ प्लसमा आइपुगेको छ
जब कोरोनाभाइरस व्यावहारिक रूपमा विश्वलाई पक्षाघात गर्न लागेको थियो, एचएमडीले त्यो घोषणा गर्‍यो कन्फर्मेटेड टर्मिनलहरूको एन्ड्रोइड १० मा अपडेटको सुरूवात ढिला भयो। आजसम्म, तिनीहरू थियो कम्पनीले हालका बर्षहरूमा मार्केटमा सुरु गरेको सबै टर्मिनलहरू अद्यावधिक गरियो, तर १ हराइरहेको थियो, नोकिया १ प्लस।
नोकिया १ प्लस फिनिश कम्पनीबाट पछिल्लो टर्मिनल हो भर्खर एन्ड्रोइड १० पाए, त्यस पछि nokia 3.2, nokia 4.2, नोकिया 8 सिरोको, nokia 2.3 y nokia 6.2. टर्मिनलहरू जसले हालको हप्ताहरूमा एन्ड्रोइडको दशौं संस्करण प्राप्त गरिसकेका छ, कम-टर्मिनल जुन हामी १०० यूरो मुनि मात्र फेला पार्न सक्छौं।
एन्ड्रोइड १० (गो संस्करण) नोकिया १ प्लसको लागि रोलआउट आज देखि सुरू हुन्छ। यति धेरै नयाँ सुविधाहरूको साथ, तपाईंको फोनले फेरि एकदम नयाँ महसुस गर्नेछ! थप विवरणहरू र बिभिन्न देशहरूमा उपलब्धताका लागि यहाँ जाँच गर्नुहोस्?https://t.co/h7fJxyxN0w# Android10 # Nokia1Plus @ नोकियामबाइल pic.twitter.com/dmfOhN4jur
- जोह सर्भिकस (@sarvikas) अप्रिल 29, 2020
फेरी, यो घोषणा गरिएको छ जुहो सार्विकस, उत्पाद प्रबन्धक, एचएमडी ग्लोबल उसको ट्वीटर खाता मार्फत र जहाँ उनले बताए कि हामी अब नयाँ सुविधाहरूबाट आनन्द लिन सक्छौं जुन यस पछिल्लो अपडेटको हातबाट आएका छन्।
हालसालैका महिनाहरूमा नोकियाले सुरु गरेको सबै अपडेटहरूमा यस्तो भएको छ, टर्मिनलहरूको पहिलो लहरमा जुन एन्ड्रोइड १० प्राप्त हुनेछ कुनै स्पेनिश भाषा बोल्ने देश भेटिएन। भाग्यवस, हामीले अधिकमा दुई हप्ता मात्र कुर्नुपर्नेछ, ताकि बाँकी देशहरू जहाँ यो टर्मिनल बिक्री गरिएको छ, डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न सक्षम हुन सम्बन्धित सूचना प्राप्त गर्दछ।
जब नोकियाले टेलिफोनी बजारमा आफ्नो फिर्ताको घोषणा गर्‍यो, यसले बजारमा पैदल यात्रा गर्ने प्रयास गर्न कम र मध्यम दूरीको ह्यान्डसेटको दायरा सुरू गर्‍यो। यद्यपि यसको सफलता अपेक्षाकृत कम छ। यसले हामीलाई प्रदान गर्ने मुख्य आकर्षण अपडेट नीति हो।
सबै टर्मिनलहरू जुन कम्पनीले बजारमा सुरु गर्‍यो दुई बर्ष अपडेटको मजा लिन्छ, यदि तिनीहरू कम-एन्ड फोनहरू भए पनि, जस्तै नोकिया १ प्लस, एक फोन जुन १०० यूरो भन्दा बढी हुँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » एन्ड्रोइड १० आधिकारिक रूपमा नोकिया १ प्लसमा आइपुगेको छ
नोकियाका लागि राम्रो, योसँग एक उत्तम अपडेट नीतिहरू छन्। श्याओमीको लाजको एकदम उल्टो जुनaको माई4लाई अपडेट गर्न attempts को प्रयासमा जान्छ र of मध्ये uns असफल भएको छ। मेरो अर्को मोबाइल राम्रो अद्यावधिक नीतिहरूको साथ एक हुन गइरहेको छ ……। तर xiaomi हुनेछैन
त्यो सहि कार्लोस हो, नोकियाले एन्ट्री-लेभल सहित सबै उपकरणहरू अपडेट गर्दैछ। HMD ग्लोबल फोन खरीद गर्ने ग्राहकहरूका लागि राम्रो।
Honor 9C, Honor 9A र Honor 9S: Android 10 को साथ तीन नयाँ प्रविष्टि-स्तर फोनहरू
Realme6प्रो पहिले नै युरोप को लागी एक रिलीज मिति छ